Efa nijerijery ny tatitra nataonao momba ny Google Analytics ve ianao, raha tsy mahita mpanondro tena hafahafa mipoitra ao anatin'ireo tatitra? Mandeha amin'ny tranokalany ianao ary tsy misy miresaka momba anao, fa misy tony hafa atolotra anao any. Hainao? Tsy nanondro fifamoivoizana tamin'ny tranokalanao mihitsy ireo olona ireo.
Raha tsy tsapanao ny fomba Google Analytics niasa, raha ny tena izy dia misy piksely ampiana amin'ny enta-mavesatra rehetra izay mandray data marobe ary mandefa izany any amin'ny motera Google Analytics. Ny Google Analytics avy eo mamaky ny angon-drakitra ary mandamina azy tsara ao anaty tatitra izay jerenao. Tsy misy majia eo!
Tena ratsy satria izy ireo aza tsy nanomboka akory ny fitsidihana ny tranokalanao! Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy fomba hanakanan'ny tranokalanao azy ireo. Nandehandeha nitety an'ity niaraka tamin'ilay mpampiantrano anay aho izay nanazava tamim-paharetana ny zavatra nataon'izy ireo hatrany hatrany mandra-pahatongany tao amin'ny karan-dohako matevina. Antsoina hoe a matoatoa referral or referrer matoatoa satria tsy mikasika ny tranokalanao mihitsy izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Misy lisitr'ireo spam referrer nohavaozina ao amin'ny Github izay ampiasain'ny mpampiasa Piwik ary tsara be. Misarika an'io lisitra io ho azy etsy ambany aho ary mamolavola azy tsara miaraka amin'ny fanambarana OR aorian'ny sehatra tsirairay (azonao atao ny mandika sy mametaka azy avy amin'ny faritra an-tsoratra etsy ambany mankany amin'ny Google Analytics):
Tehirizo ny fizarana ary azo alaina amin'ny trano rehetra ao anatin'ny kaontinao.
Hahita script and plugins amina taonina maro ianao hanandrana sy hanakana ireo spamme referral avy amin'ny tranokalanao. Aza misahirana mampiasa azy… tadidio fa tsy fitsidihana ny tranonkalanao akory ireo. Ireo script ireo dia mampiasa ny pixel GA mivantana avy amin'ny mpizara azy ary tsy tonga tany aminao akory!
Jul 3, 2014 amin'ny 8: 33 AM
Misaotra anao noho ireto torohevitra ireto. Nahasosotra ny fananana izany amin'ny statiko.
Dec 1, 2015 ao amin'ny 5: PM PM
Miloka ianao. Nohavaozinay ny vahaolana marina momba an'io satria tsy tonga eo amin'ny tranokalanao akory ireo spammer referral.
May 6, 2015 ao amin'ny 1: 03 PM
Nanana fahasosorana ihany koa izahay tamin'ny spam referrer. Nanandrana "vahaolana" vitsivitsy hita tao amin'ny tranonkala izahay - btw htaccess-manipulaton dia tsy manakana ireo mpanondro matoatoa -, nandany fotoana kely tamin'ny famoronana tanana sivana tao amin'ny GA ary nanangana ny vahaolana mandeha ho azy: http://www.referrer-spam.help ...
Manantena izahay fa ho tianao izany.
Ary toa lasa mpilalao natanjaka ny referrer Ghost. Nanavao ny torohevitra ao amin'ny tranonkala izahay. Misaotra ny fanampiana rehetra omenao!
May 21, 2015 ao amin'ny 5: 23 PM
Misaotra anao amin'ny fanampianao rehetra amin'izany!
Miloka ianao. Nohavaozinay be dia be ny toro-hevitra mifototra amin'ny fomba fampidirana matoatoa vaovao ampiasain'i jerks ireo.
Jun 11, 2015 ao amin'ny 3: 16 PM
Fanampiana lehibe eto, misaotra! Ankehitriny hiandry am-paharetana ny fiovan'ny tahan'ny ounce
Nanavao ny torohevitra aho mba hanomezana ampahany ho an'ny Google Analytics. Amin'izany no ahitanao ny vokany eo noho eo.
5 Aogositra 2015 amin'ny 4:21 PM
Olana spam manaitaitra / mikorontana izao: manala azy ny spam ary manolotra fanafody - izany no heveriko.
Efa nojerenao ve ireo sakana IP na zavatra hafa hahitana raha misy elanelana hahitana azy ireo?
Hevitra hafa ezahiko hojerena raha nanandrana ny hafa:
1) Hilaza aho fa avereno ny cookie mba hanisana fotoana fanisana maharitra kokoa toy ny fitsidihana fa ireo bot kosa dia hanohy hanisy ping ny tranonkala. Ireo zavatra ireo dia mila raisina ho toy ny fanafihana DDoS noho ny fomba fandatsany loharanon-karena ara-batana
2) Manaova piraofilina vaovao ary apetraho ao amin'ny Google Tag Manager ny kaody vaovao mba tsy ho mora esorina ilay kaody. Ary koa, ny fanaovana kaonty vaovao sy manao profil 4 ka ny isa farany tsy mifarana amin'ny -1 dia dinika iray hafa. Saingy, heveriko fa amin'izao fotoana izao, ny spamme dia mamorona automatique ny nomeraon'ny UA na tsy miraharaha ireo laharana UA miaraka sy mampiasa ilay fitaovana fananganana url fampielezan-kevitra
Aug 13, 2015 amin'ny 6: 06 AM
Salama, mpitari-dalana tsara, manangana fitaovana maimaim-poana aho izay miditra amin'ny famakafakana ary manangana rakitra htaccess ho an'ny tranonkalanao, maimaim-poana http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ andramo izany
14 Aogositra 2015 amin'ny 10:20 PM
Colin, fitaovana mahafinaritra ity! Ho ampiako ao anaty post io!
Dec 8, 2015 ao amin'ny 4: PM PM
Zavatra tsara, Douglas.
Dec 8, 2015 ao amin'ny 5: PM PM
Misaotra Don! Manantena fa milamina daholo.
Dec 22, 2015 amin'ny 10: 27 AM
Tena mahasoa…. ity karazana fivezivezena amin'ny spam ity no antony voalohany mahatonga ny fikorontanan'ny tatitra amin'ny analytics, izay tena tsy manampy amin'ny fampisehoana amin'ny mpanjifa ny fomba fiasan'ilay tranonkala.
1 Jan 2016 amin'ny 12:55 PM
misaotra fa feno spam ny tranokalako ary noraràn'ny adsense aho
3 Jan 2016 amin'ny 6:10 PM
Manjary olana goavana ankehitriny ny spam. Na izany aza, ity lahatsoratra ity dia tsy momba ny tranokalanao na olona mandoka ny tranokalanao. Manala ny Google Analytics izy ireo. Tsy tokony hisy fiatraikany amin'ny Adsense mihitsy izany fa hanakorontana ny Google Analytics anao.
Jan 19, 2016 ao amin'ny 8: 30 AM
Tena leo an'ity spam ity aho. Manantena aho fa hanampy ahy io.
Jan 19, 2016 ao amin'ny 11: 32 AM
Izaho koa dia tsara. Tsy mino aho fa tsy nahita vahaolana momba an'io i Google.
Jan 19, 2016 ao amin'ny 10: 33 AM
Sombiny lehibe, nanana olana tamin'io taloha ary ny ankamaroan'ny olona dia toa tsy mahalala akory hoe mandeha io!
Jan 19, 2016 ao amin'ny 11: 31 AM
Misaotra ary manaiky aho… Tena tsy fantatro izay mitranga efa ela koa!
Jan 24, 2016 ao amin'ny 9: 14 AM
Misaotra ny lahatsoratra Douglas. Mamaky tsara. Tena halako tokoa ny spam, niteraka olana be dia be tamin'ny tranokalako izany taloha, indraindray nahatonga ny tranokalaniko wordpress nianjera rehefa nanana kinova wordpress taloha aho.
Azo antoka fa hizara an'ity lahatsoratra ity amin'ny tranokalako.
Manomboka bilaogy wordpress ho an'ny mpivarotra aho izao.
May 1, 2016 amin'ny 11: 28 AM
Salama Douglas .. manana fanontaniana iray aho. Mahazo fitsidihana vitsivitsy avy amin'ny com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Anisan'izany ny spam? misaotra tamin'ny valinteninao
May 3, 2016 amin'ny 10: 26 AM
Salama Fauzy, mino aho fa referrer ara-dalàna avy amin'ny Rindrambaiko finday Google Android.
Aug 11, 2016 amin'ny 10: 46 AM
Fa maninona no mitranga ny referral a Ghost, inona no ivoahan'ireo spammers ireo amin'izany?
Aug 11, 2016 amin'ny 10: 49 AM
Tena mahasosotra tokoa izany. Ny hany tombony azo dia ireo mpampiasa analytics tsy dia be pitsiny no mitady ny referrer ary afaka mividy ny vokatra na serivisin'izy ireo. Ity dia fitaovana mora vidy sy mahatsikaiky indrindra hanandramana hamitahana tompona tranonkala tsy dia manam-pahalalana.